Ciidamo Itoobiyaan ah oo kasoo gudbay xadka Soomaaliya [Dhageyso]
By Wariyaha Siyaasadda
DOOLOW, Soomaaliya - Ciidamo cusub oo ka socda dalka Itoobiya ayaa kasoo gudbay maalmihii lasoo dhaafay xuduuda Soomaaliya kala wadaagto dalkaasi dhanka gobolka Gedo.
Ciidamadan oo lagu qiyaasay inay gaarayaan kun askari (1,000) islamarkaana wata ilaa iyo 30 gaari iyo baabuurta gaashaaman oo ku xiran hubka culus, ayaa usoo tallaabay magaalada Doolow ee Gobolkaasi
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq Al-qaadi, oo la haday VOA ayaa sheegay in Ciidamadan ay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya duulaan cusub oo ka dhan ah Al Shabaab.
Hadalka Gudoomiyaha ayaa imaanaya xilli dadka u kuurgala arimaha amniga madaxda dowlada iyo saraakiisha ciidamada AMSIOM ku eedeeyaan iney saxaafada ka shaaciyaan howlgalada lagu qaadayo kooxda Al-shabaab.
Dhaqdhaqaan ciidan ayaa yimid kadib markii bishii Oktoobar Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo booqasho deg deg ah uu ku tagey dalalka Uganda, Itoobiye iyo Jabuuti kuwasoo ka codsadey iney ciidamadooda soo kordhiyaan si ay uga qayb qaataan howlgalka uu ku dhawaaqey.
Farmaajo ayaa ololihiisa doorashada ku galey in dowlad uu hogaaminayo ka maarmi doonto tageerada ciidan ee dalalka darsiska ah gaar ahaan dalka Itoobiya balse arinkaas ayaa meesha ka baxey tan iyo intii Villa Soomaaliya wareejisay sarkaal ka tirsanaa Jabhadda ONLF.
Madaxda maamul goboleedyada iyo Dowladd Faderaalka oo kulan uga socdo Muqdisho ayaa kawada hadlay arrimaha amniga iyo sidoo sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka Al Shabaab.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqday Wasaaradda Gaashaandhigga...
​Somalia: Ciidamada Ethiopia oo Al shabaab ka saarey Leego
Soomaliya 07.08.2017. 09:48
Soomaaliya: Saan-saan colaadeed oo ka taagan Gedo
Soomaliya 14.02.2018. 10:53
Al Shabaab oo wareegtay deegaan ku dhaw Baraawe
Soomaliya 31.10.2017. 12:43
​Gollaha Amniga oo mudo-kordhin u sameeyay AMISOM [AKHRI]
Soomaliya 31.08.2017. 01:54